Inobatanidza Vateereri Venyu - Miti, Vateereri, Vatsva -Kana Ikozvino - NAB Kuratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » nhau » Inobatanidza Vateereri Verepfenyuro - Matambo, Vateereri, Vafudzi -Kana iri NOW
Inobatanidza Vateereri Verepfenyuro - Matambo, Vateereri, Vafudzi -Kana iri NOW
"Zvakanaka iwe unoziva kuti handina kumbobvira ndasangana nevakomana. Saka, iwe unofanira kutaurira mazita avo, uye ini ndichaziva kuti ndiani ari kutamba muboka. "- Bud Costello, "Avo Vasingatendi Mapfumbamwe, "Universal Pictures, 1945
Dzose tisati tambocheka tambo, taishamisika kana mwero webhola negorofu raizorasikirwa nerudo rwavo (uye vateereri) nekuda kwekutsvaga. Mushure mezvose, taiva nebhola rishanu, rimwe baseball, bhora neNASCAR, pamwe chete nemigwagwa miviri yegorofu mubato redu guru uye kwete vose vaiva vhidhiyo chaiyo ... zvakanaka?
Zvakanaka, Super Bowl (kudai matangazo) uye mugumo wemuswe weTiger Woods 'kudzoka kuzokunda nhangemutange huru mushure memazuva mashanu akaoma tsvina yakanga yakakura asi yakawanda kunze kweiyo, kwete yakawanda.
Kubva kuBibC, kwakave nekugadziriswa patsva nezvemitambo yekushambadzira uye mararamiro ehupenyu, nekuda kwekukura nokukurumidza kwe IP-based OTT kuona.
Futbol, ​​football, baseball, basketball nguva dzose dzaive nenzvimbo inodziya mumatareji emitambo 'nokuti ngatitendei, iyo yakaunza mari yakawanda yemadhora uye yakawanda kudarika chikamu chavo chemaziso eziso.
Game Rehash - Nekuda kukurukurirana kwemazuva ano kunononoka kwekupedzisira manheru kana kuti yemauto emusi wekupedzisira kana chiitiko ikozvino yakawanda chaizvo, ichiri chiitiko chisina kunaka kutaura pamusoro pemakwikwi uye kudzokorora mitambo.
Zvadaro pane PPV yakawanda-inobatsira (kubhadhara maonero ose) bhodhi, yakavhenganiswa martial arts uye kurwisana.
Asi mitambo yakafanana neyekukwikwidzana, kubhururuka, danda, cricket, lacrosse, skateboarding, drone / hotrod racing, uye mhando dzemitambo yekicheti dzakasara kuti dzizvidzivirire paIndaneti. Kana, kana vakanga vane ruzivo, kuti vabatanidzwe mumabhuku eESPN +, Hulu Live kana Amazon.
Asi maererano naAllan McLennan, Mutungamiri Mukuru wePADEM Media Group, makambani, mapoka, mitambo yeTV, makambani edijitori uye vatambi ivo pachavo vari kuwana nzira itsva dzekubatana nevafasi munyika yose neOTT.
"Yakaitwa zvakanaka, kutumirana pamusoro pePI kunomirira chinhu chitsva chakanaka cheMVPD nekuvabvumira kupa vhidhiyo zvinhu zvakananga kuvateereri vavo," akadaro McLennan. "Inovapa nemikana yakawanda yemari; uye zvinonyanya kukosha, kushamwaridzana kwevadzidzi.
"Chiitiko chinotsigira, mapoka nevatambi vanogona kuisa pfungwa pakupa ruzivo rwakanakisisa rungangowedzera hupfumi," akasimbisa. "Uye panguva imwe chete, zvitsva zvinogona kuvhara kushanda kwemutemo kwekutengesa zvakaderera zvakagadzirwa.
"Unyanzvi hwokugadzira zvinhu hwakakura, uye zvakawanda zviri kuendeswa iye zvino," akaenderera mberi. "Kuenderera mberi mitambo yemitambo pamusoro pePIP kunogona kuva nani zvikuru, kunyanya kubatanidza uye munzira dzakawanda kuwirirana pane TV yakatarwa yakatarwa. Kusarudzwa TV kune chinyorwa chegore re 50; uye mumakore mashomanana, IP-based kutaurira iko kutotama kukwira pamakera kuti ipe zvinotarisa vataridzi-kurarama kushingaira pane chero chinyorwa kana chida chavanoda. Nheyo ichave iri kuisa nekuiendesa nenzira inokodzera vafudzi vanoda kana vasingavhiringidzi nekuda kwezvakasarudzwa. "
Nekudhura kwezvinhu zvakaderera uye kuwedzerwa kushandiswa kwekodzero, kunezve kufarira kunowanikwa muSports neSports kune vashumiri vavo vakazvitsaurira uye vanoramba vachiwedzera.
Uye nekuti umwe neumwe ane vateereri vakanyatsoteerera (kunyange iyo yaiva mitambo yemasikirwo), ivo vari mukana wekupa huwandu hwevatsigiri vatsva uye mumatambudziko akawanda, rubatsiro rwevhu (kureva, mari).
Ad Shift - Apo vatengi vanochinja, ndizvo zvinoita vatengesi. Mukuwedzera, kutengesa kuchinja zvinhu zviripo kuti zviwanike kune vanhu pazvikwereti zvavo zvemafoni zvinoda nzira itsva uye kusagadzikana kutora vataridzi kutarisa.
Imwe nyaya ichangobva kuitika inonzi Limelight yakagamuchira kuti 60 muzana yevatengi vepasi rose vanoda kutarisa (uye kuribhadhara) mitambo yepaIndaneti kana vachigona kuvimbiswa kuti vaifarire pahwindo rezvavanosarudza pasina kuona kutambisa, kutengesa kana zvimwe zvinhu.
Vanyoresa kadhi vanobhadhara zvimwe zvinowanikwa mumasangano kupfuura cord-cutters. Inopfuura hafu (59 muzana) inyorera kune imwe chete yevhidhiyo pane zvinodiwa (VOD) service.
Vanyori veChechi vanowedzerazve tsika dzeTV nemavhidhiyo evhidhiyo, vachibhadhara mavhareji emitambo yekushambadzira ye1.2, asi vasingabhadhari vhesi vanobhadhara basa re 0.7.
Zviuru zvemakore zvinotungamirira kushandura kwenyika yose kuvhidhiyo yeIndaneti. Vapindi venguva ye 18-35 zvino vari kutarisa vhidhiyo yakawanda paIndaneti kupfuura kuparidzirwa. Mireniyari yevechidiki (ane makore 18-25) tarisa mavhareji emaawa mapfumbamwe-13 maminiti emavhidhiyo emavhidhiyo kwevhiki nevhiki, achienzaniswa nemaawa matanhatu, maminitsi 11 emitambo yemagariro. 15 muzana yemakore ane zviuru zvemakore vanoshandisa zvinopfuura maawa 20 pavhiki vachitarisa purogiramu yepaIndaneti.
Vashandi vachabvisa basa ravo nekuda kwekuwedzera kwemitengo. Vanopfuura hafu (55 muzana) yevashandi venyika yose vanoti kuwedzera kwemazana ndicho chikonzero chikuru chekuregesa sVOD service. Inenge hafu (46 pfumbamwe) inonyora zvakafanana nekunyorera kwekambani.
Kutarisa paIndaneti kunzvimbo dzakawanda nenyika. Vatariri vari muPhilippines vanotarisa vhidhiyo yakawanda paIndaneti mumaawa masere, maminitsi 46 vhiki imwe neimwe, inoteverwa pedyo neIndia neUnited States mumaawa anoda kusvika masere nehafu ekuona vhiki imwe neimwe. Germany ine yepamusoro yepamutambo yevideo viewership muhora maawa mashanu, maminitsi maviri.
Maererano naMclennan, kurarama mitambo uye kuenzanirana (maitiro akawanda) ndeimwe yezvikamu zvakakurumidza kukura mumusangano wekushambadzira.
Nokuda kwekugadzika kwemaCDN akaoneswa (content delivery networks) uye nokuti Indaneti uye Wi-Fi zviri pachena, mapoka akawanda emitambo emitambo ari kufunga kugadzirisa matanho avo ezviitiko, maitiro ezvakaitika uye kumashure-e-maonero / maonero ekubatana nevamwe rakasimba roster yehuwandu.
OTT Bandwidth - Kuzadzisa zvido zvevatengi kubva pakugadzwa TV kusvika kuTTT kuona, ATSC uye SMPTE yakagadziridza hutori hutsva hunogona kutumira vhidhiyo zvakagadzirwa zvakajeka uye zvakajeka DTC. Kuti tibatanidze vamwe vatengi vanoona vatengi, terecos yakagadzira 5G iyo inopa huwandu hwemagetsi ekutenderera kwekutarisa nevanoshandisa zvirongwa zve data uye Wi-Fi.
HD, UHD, 4K / HDR vhidhiyo nemitambo zvichiri kugoverwa zuva nezuva nemigumisiro yakaisvonaka.
Mukuwedzera, McLennan, mumwe wevanhu vokutanga muOTT uye pa-kudai chirongwa chemaitiro, akati, "SMPTE's (Society of Motion Picture & Television Engineers) akaita basa rakaisvonaka rekusimbisa Komiti yeATSC (Advanced Television Systems Komiti) 3.0 standard yakagadziriswa pakuparidzirwa panguva imwechete uye nokukurumidza kuunza maonero kune mamiriyoni evanhu.
"Vashandi ve5G vakaitawo basa rakanaka kwazvo rokuzadzisa mitemo yavo zvakare," akawedzera. "Vose, vanogona kupa varidzi vemari nevatengi maonero avanofarira, kunyanya mitambo yavo.
Panyaya ye2018 Mobile World Congress (MWC), telcos ichangobva kuzivisa kuti ichava nekombiyuta ye 5G yakaiswa mumisika ye 50. Ichokwadi, Verizon akazarura misika midzi iyi mwedzi wapfuura uye Ericsson zvifananidzi kuti 10 + muzana yemakethe pasi rose angave ari 5G-akashandiswa ne2020.
"Idzi mbiri dzichapa sangano rakasimba re ultra-high-speed streaming," akadaro McLennan.
"Sinclair, Pearl uye vashambadziri vakawanda vemarudzi ose vakatotora basa reATSC nemigumisiro yakawanda nezvimwe zvakarongerwa kupedzisa gore rino uye rinotevera." akadaro
Kuvhunduka Kunomhanya - Nekuda kwenyika yose kushandiswa kweIndaneti uye mafoni ekufambisa nokukurumidza nekuwedzera uye kuvandudzwa, vatengi vanogona nyore nyore kufara, kufara kwehupfumi, nhau nemitambo pasina gumbo rinoshungurudza rinokufadza rorufu.
Kusina nguva, kutyisa kunotinhira kubhururuka, inzwi risina kubvumirana nemabasa, zvinyorwa zvinosvika 1-5 zvishoma pamusana peumwe munhu usati waona yave iyo chikamu chese dambudziko guru rinotarisana nehuwandu hwekubudisa video - latency.
Iyo yakaderera latency, iyo inofadza muoni, kana yakanyanya kugutsikana nevatengi uye zvishoma zvishoma mutambi wemutambo achanyanya kutsvaga kana kushandura mabasa.
Zvose zveCDNs uye hardware / software vashandi zvinowedzera kuedza kuunza ultra-low (near zero) latency performance HD, UHD uye 4K / HDR zvayo.
Vari kuita izvi nguva dzose uye vakatendeseka ... uye nehutano hutsva, huchava huri nani!
Codec Enhancements - Zvimwe zvigadziridzo zvakagadzirwa kuti zvigadzire magetsi emodhikodhi / decoder teknolojia uye zvigadziro zvayo kuti zvibvumire kugoverwa kweOTA yehudhiyo yevhidhiyo yakawanda kusanganisira zviitiko zvemitambo ye 4K / HDR pamwe chete nemagetsi ekutambisa, kutarisa nekukurukurirana mabasa.
State-of-the-art encoding solutions, kunyanya sarudzo dzakadai seV-Nova pamwe neBitmovin, ATME nevamwe, dziri kutoshandiswa kutsigira mavhidhiyo emitambo yemavhidhiyo akadai HD, Ultra HD 4K, uye 360 VR.
Vanotsigirawo HLS (HTTP Live Streaming), HEVC (High Efficiency Video Coding) uye MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming pamusoro peHTTP).
Zvose zvave zvichisimbiswa nemaoko matsva, marefu emhando dzakasiyana-siyana dzeHRR (tivimbe isu, zvinoreva kuuraya kutarisa pane chero skrini).
Chinangwa - kupa ruzivo rwehuwandu hwehutachiona kune ose ma-IP-akazvigadziridza uye kuendesa zvakadzika mazinga ehupenyu hwevatengi. Sarudzo dzakadai seNet Insight's Sye dzinoita kuti zvive nyore kunakidzwa nemisipiramu-yezviitiko - chiitiko pahwindo guru, pedyo-ups / background pa 2nd chinyorwa uye kutumira mameseji / tweeting pa 3rd chinyorwa panguva imwe chete.
Multitask - Kunyange zvazvo "mutambo mukuru" uchiri kuonekwa paTV, vatarisi vari kuwedzera kushandisa zvimwe zvikwangwani kuti vatsinhanise nhau / ruzivo pamusoro pezvavanoita uye kunyange kutarisa maonero akasiyana-siyana nevanoswedera pedyo nevatori vechikamu. Zvinhu zvakagadziridzwa zvinowedzera kukosha kune mutengi we franchise uye rimwe boka.
Woody Woodhall, purezidhendi weAllied Post, akapinda mukati mangu makore akawanda apfuura kuti ruzha rwemfirimu ndiro rinokosha zvikuru, uye rakasvibiswa, rakagadzirisa chinhu chemufirimu mukuru.
Zvinenge zvakanyanya kukosha kune vanhu vanoda chaizvo kunyatsoshamiswa mumutambo wavo wechiitiko chekusarudza.
Kubvuma, chikamu chakanakisisa chemutambo ndechekuteerera kana chiri kunzwa hutambo hwemuteereri, shanduro ye futbol mumambure, thunk yekambani inopikisana nebhokisi re tennis, kuwirirana kwemoto mbiri dzeNASCAR kana kutaura kwechibage LeBron naDraymond.
Pasina kunyatsonzwisisika, mutambo ungadai uri ... kubvunda!
Kunyangwe iri Dolby Atmos kana kuti codec yemutambo, ndiyo HD, UHD, 3D kana kutinhira kwemvura inokuchengetedza "mumutambo."
Chikamu Chisina Kukodzera CheMutambo
Piracy - Kusina mvumo, kuparadzirwa kwepamutemo kwezviitiko zvemitambo nemabasa zvinodhura mitambo yekutamba, zviitiko uye mauto zvakadai se $ 9B gore negore. Mukuwedzera, pirate nzvimbo dzinopawo vatarisi vavo kuwedzera zvinhu zvakadai semarware uye kubhakwa kwekuziva.
Chikamu chakaipisisa chekutambira mitambo (uye mavhidhiyo ane zvinyorwa) ndeyechirwere.
Soccer World Cup muRussia yakanga ine mitsara ye 2,637 pirate yemasidinals pa Facebook, YouTube, Twitch, uye Periscope. Pakanga pane zvitsva zve 30M uye mitsara ye 3,653 yeFrance -Croatia yekupedzisira uye inopfuura 60M maonero.
Izvo "shrinkage" (kuverenga inonyangarika) inodhura FIFA nevaya vanochengetedza mamiriyoni kodzero dzemamiriyoni!
Hungu, vadzidzisi vemvumo vanogona kunyatsoona vatadzi kusvika pasi peIndaneti, asi mitemo inoda kuti vadzidzisi vekodzero vatumire zviziviso kune mawebsite, vachivakumbira kuti vatore pasi mavhidhiyo anotadza.
Nenzira yakanaka, pane zvishandiso zvakadai zvinowanikwa neNAGRA ine simba rakasimba rekuchengetedza uye rinogona kudzivirira vateereri vemitambo nevaridzi vehupenyu vasati vatongerwa.
"Avhareji yemasikirwo anonyanya kufarira angafunga nezvechiitiko chechirwere chisina mhosva," McLennan akati, "Asi izvi hazvina kururama pamatanho akawanda.
Kubata - Zvikwata zvePirate zvinowanzopa mari shoma kana kuti "kusununguka" kwekuita zvemitambo kubva kuThe World Cup, US Open, Super Bowl, Rose Bowl uye kunyange makwikwi ekusekondari; kazhinji nehuwandu hwehutano uye kuvimbika pane vadzidzisi, vatsigiri vaida kuunza.
"Vanhu vasingazivi kuti ivo vari mungozi yakakura nekufadzwa nemutambo wepirated," McLennan akasimbisa. "Nzizi dzisiri pamutemo dzinosanganisirawo 'zvimwe zvinhu zvakadai' semarware, matangazo e cybertheft nemamwe mabasa ezvakaipa zvinogona kuita kuti mutambo wemitambo unodhura unogona kudhura."
Kuwanika kwepasi rose kwebhanwidth uye teknolojia inobvumira kushandiswa kwemazuva ano kwehuwandu hwehutano hwakafanana semitambo inogona kuonekwa pane chero chinyorwa munguva chaiyo kana nguva iyo iri nyore kune anofarira.
Zvinowedzera, mitambo yemitambo, vatsigiri nevatambi vane zvigadziriswe zvishandiso uye zvigadziriswa zvinowanikwa kwavari kuti vawane zviitiko zvemuhara, zvekugara, zvepanyika uye zvepanyika pamitengo yakagadzirwa nevatengi.
Tatoona kuti vateereri vemitambo vave vashanduki vekutanga vachirarama nekushambadzira mazano uye vanobatanidzwa zvikuru, vanobatana nevatariri.
Uye zvakadzika, zvakanyanyisa zviitiko zvemitambo zviri kuenderera mberi zvichiendeswa kune vatungamiri-kune-vatengi.
Mitambo inopararira yemitambo mikuru, maduku uye niche inowedzera kuva nemukana wekuvaka izwi rakasiyana nemari uye yekuteerera kune vese vanoita sevanokurumidza kana vane fanatic uye vataridzi.
Ne digital digital OTT, vataridzi vanogona kuzviwana nyore nyore nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hunongopedzerwa nemagariro evanhu - chero bedzi vasingaiti kuti zvive nyore.
Zvadaro, munhu wose anokunda!
Hapana anoda vateereri vanofarira kuti vadzokere zvakare mirayiridzo kumashure kwavari sezvo Lou akaita Bud, "Ndizvo zvakafanana newe! Same sewe! Ini ndinokanda bhora kunaani. Munhu wose anokanda bhora uye murume wacho anomhanyira kune wechipiri. Ndiani anotora bhora ndokurikanda kuChii. Chii chinokandira icho ini Handizivi. Ini Handizivi Inoikurirazve Mangwana, Tatu katatu. Mumwe mukomana anomuka ndokurova bhora refu refu kumusana. Sei? Handizivi! Ari wechitatu uye ini handisi kupa darn! "
mutungamiriri wenyika at Marken Communications
Andy ndiye Mutevedzeri uye Mutungamiri weMarken Communications Inc. neMushambadziro neNyanzvi yeNyanzvi, iri muSan Francisco munzvimbo yaAugust 1977 kuNhasi.Marken Communications isangano rebasa rakazara rinowedzera mubhizinesi / mararamiro ekugadzirisa, nzvimbo, hutsva, nekukurukurirana . Sangano regore re30 rave rakabatanidzwa nehuwandu hwakawanda hwehutano nemabasa ekutengeserana. Chiitiko chinosanganisira kugadzirisa zvirongwa uye mararamiro uye kuurayiwa nemakambani uye maIndaneti makambani anosanganisira AT & T neCERFnet pamwe nekuchengetedza, kuchengetedzwa kwekuchengetedza uye mavhidhiyo zvinosanganisira zvikwata zvinosanganisira Philips, InterVideo, Ulead, OWC, NewerTech, Sonic, Corel, Matsushita, Pinnacle, Dazzle , Cyberlink, Mountain Computer, Nikon, Plasmon, NTI, ADS Tech, Verbatim, Mitsubishi uye Panasonic.
Mifananidzo yakapera naAndy Marken (ona zvose)
Inobatanidza Vateereri Verepfenyuro - Matambo, Vateereri, Vafudzi -Kana iri NOW - November 7, 2018
Kuenzana, Sekukuru Kwemafirimu, Inoda Kushongedzwa Kwazvo Zvose Zvese - October 31, 2018
M & E Evolution Inobatsira Yese Nyaya Yakaona Nyaya - October 17, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Contribution Isovideo, viarte, HDR, kuderedza ruzha, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, kutetwa kwetrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows subtitling, Digital Nirvana, media monitoring, IBC TV Technology Ultra HD Forum Video Engineer rakapotsa chokwadi	2018-11-07
Previous: AUTOGRAPH DELIVERS FREESPEAK II HWASINA UYE COMMS SOLUTION YA ED SHEERAN 'DIVIDE' TOUR
Zvadaro: FilmLight inojekesa kuzvipira kuJapan yekusika mharaunda pa Inter BEE 2018
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "Kubatanidza Vateereri Venyu - Matambi, Vateereri, Vatsva -Kunyange ICHI IYE". Heino nheyo yehutano yewebhu: https://www.broadcastbeat.com/engaging-live-audience-teams-players-fans-want-it-now/. Ndatenda.